မိုးရာသီအတွင်း Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုပိုမိုများပြားလာပြီလား ? - YTV
Home » Blogs » မိုးရာသီအတွင်း Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုပိုမိုများပြားလာပြီလား ?
မိုးရာသီအတွင်း Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုပိုမိုများပြားလာပြီလား ?
Blogs September 12, 2020 10:49 am
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မုတ်သုန်ရာသီရောက်ပြီဆိုရင် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မှု ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ၊ ဆင်တုပ်ကွေး စတဲ့ တုပ်ကွေးရောဂါများကြောင့် လူတိုင်းနီးပါး ဖျားနာခြင်း ၊ အအေးမိခြင်း စတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် မိုးရာသီမှာ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဆက်စပ်ရောဂါများကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်တာကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ အထူးဂရုပြုသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများက သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်……
Covid-19 ရောဂါလက္ခဏာများဟာ ရာသီအလိုက်တုပ်ကွေးနဲ့ဆင်တူတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေ တာကြောင့် မိုးရာသီမှာ ကျနော်တို့အားလုံး အစားအစာတွေကို ပိုမိုသတိထားဖို့နဲ့ လက်ရှိရာသီကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်း အကြံပြုချက်များစွာဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်….
ENT အထူးကုနဲ့ ပါကစ္စတန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Dr. Qaiser Sajjad က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါများနဲ့ ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ရုတ်တရက်အပူချိန်ကျဆင်းခြင်းက ဓာတ်မတည့်ခြင်း နဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ခံစားနေရသူများရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ် လို့ သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်…
ဒေါက်တာ Sajjad ဆိုသူကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် မိမိဘာသာ ထင်ရာမြင်ရာ ဆေးကုသခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဆေးဝါးပညာရှင်များ၊ ဆရာဝန်များနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များက လူနာများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုများပေးဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်. လူနာများကလည်း နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်ထင်ရာတွေလုပ်နေမယ့်အစား ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူထံ သွားရောက်ပြသရပါမယ်. ဆေးခန်းသွားတဲ့အခါမှာ အထူးသတိထားရမှာကတော့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ mask တပ်ထားဖို့ပါပဲ….
"ရေကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့ အသားဝါခြင်းတို့ဟာ coronavirus အခြေအနေကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်တာကြောင့် အပြင်စာတွေ ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူစားသောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရပါမယ်. အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိထားပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်….
လမ်းဘေးအစားအစာများဟာ စားချင်စိတ်ကို အတော့်ကို သွေးဆောင်နိုင်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း မသန့်ရှင်းတဲ့အခါ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းနဲ့ ၀ မ်းလျှောခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် မုတ်သုန်ရာသီနဲ့ ဆက်စပ်ရောဂါများကြောင့် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကို စိုးထိတ်မနေရအောင် အကောင်းဆုံး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေထိုင်စားသောက်ကြပါလို့ အသိပေးလိုက်ပါရစေ…
“ချစ်ပါ၊ ဂရုစိုက်ပါ ၊ မျှဝေပါ”